Booliska oo faah faahiyay khasaaraha ka dhashay qaraxa Muqdisho | Banaadir Times
HomeUncategorisedBooliska oo faah faahiyay khasaaraha ka dhashay qaraxa Muqdisho
Booliska oo faah faahiyay khasaaraha ka dhashay qaraxa Muqdisho
Taliska Ciidamada Booliska Soomaaliyeed ayaa faah faahin guud ka bixiyey khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed ee ka dhashay qarax ismiidaamin ahaa oo ka dhacay meel u dhow Isgoyska Sayidka ee Magaalada muqdisho.
War-Saxaafadeed kasoo baxay Booliska Somaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in gaari NOHA ah oo xoog kusoo maray barta hubinta gaadiidka ee u dhow iskoyska Dabbka uu ku qarxay Koontoroola Sayidka.
Sidoo kale Booliska waxaa ay sheegeen in qaraxaas ay ku dhaawacmeen 7 Ruux iyo burburka Gaadiid kala duwan sida 8 Gaadiidka yar yar ah iyo 9 Mooto Bajaaj, isla markaana uusan jirin khasaaro dhimasho ah.
Hoos Ka Akhriso War-Saxaafadeed kasoo baxay Booliska Soomaaliya.
Previous articleKhasaaro hordhac ah oo laga helay qaraxa ka dhacay Muqdisho.
Next articleBooliska Koonfur Afrika oo xiray Hoggaamiyaha Burcadda disha ganacsatada Soomaalida